साथीले मेरो चित्त दुखायो भने के गर्ने? | युवाहरू सोध्छन्‌
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अफ्रिकान्स अरबी अरबी (लेबनान) अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इटालियन इन्डोनिसियन इबान इलोको इसोको उज्बेक उज्बेक (रोमन) उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्होबो एस्टोनियन कन्नडा काचिन काजाक काजाक (अरबी) काम्बा किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज किश कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वेचा (आयाकुचो) क्षोसा गा गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टेटन डिली डच डेनिश तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फन फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बाओले बिस्लामा बुल्गेरियन ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भियतनामिज मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मले मल्यालम माम माम्ब्वे-लुंगु मालागासी माल्टिज मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन सिंहला सिबेम्बा सुन्डा सेत्स्वाना सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
समस्या नै नहुने कुनै पनि सम्बन्ध छैन। त्रुटिपूर्ण भएकोले तपाईँको राम्रो साथी, तपाईँको सबैभन्दा मिल्ने साथीले समेत तपाईँको चित्त दुख्ने कुनै काम गर्न वा केही भन्‍न सक्छन्‌। अनि यो कुरा नबिर्सनुहोस्‌, तपाईँ आफै पनि त्रुटिपूर्ण हुनुहुन्छ। त्यसैले नढाँटी भन्‍नुपर्दा, कुनै बेला तपाईँ आफैले पनि कसैको चित्त दुखाउनुभएको हुन सक्छ!—याकूब ३:२.
इन्टरनेटको कारण पनि तपाईँको चित्त दुख्न सक्छ। उदाहरणको लागि, डेभिड नाम गरेका एक किशोर यसो भन्छन्‌: “तपाईँ अनलाइनमा हुनुहुन्छ अनि तपाईँले तपाईँको साथी अरूसँग रमाइलो गरिरहेको फोटो देख्नुभयो। त्यतिबेला तपाईँ ‘मलाई चाहिँ किन नबोलाएको होला’ भनेर सोच्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँ ‘अरूलाई मेरो वास्तै छैन’ भन्‍ने महसुस गर्नुहुन्छ र निराश हुनुहुन्छ।”
समस्या वास्तवमा के हो, तपाईँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
आफैलाई जाँच्नुहोस्‌। बाइबल यसो भन्छ: “रीस देखाउन छिटो नगर्‌, किनभने रीस मूर्खको मनमा हुन्छ।”—उपदेशक ७:९.
“तपाईँ जुन कुराले गर्दा निराश हुनुभएको थियो, वास्तवमा त्यो त्यत्ति ठूलो समस्या होइन रहेछ भनेर तपाईँले पछि मात्र थाह पाउनुहुन्छ।”—अलिशा।
यसबारे सोच्नुहोस्‌: के तपाईँको सानो कुरामा पनि चित्त दुखाइहाल्ने बानी छ? कसैले तपाईँको चित्त दुख्ने केही कुरा भन्दा वा गर्दा सहन सिक्नुभए कसो होला?—उपदेशक ७:२१, २२.
मित्रतामा समस्या उत्पन्‍न हुँदा प्रत्येक चोटि नै त्यसबारे कुरा गर्नु भनेको घरीघरी ढोका उघारेर न्यानो कोठामा चिसो हावा छिर्न दिनु जस्तै हो
क्षमा दिँदा हुने फाइदाबारे सोच्नुहोस्‌। बाइबल भन्छ: “दोषको वास्ता नगर्नु मानिसको गौरव हो।”—हितोपदेश १९:११.
“गुनासो गर्ने जायज कारण छ नै भने पनि खुला मनले क्षमा दिनु राम्रो हो। अनि खुला मनले क्षमा दिनु भनेको क्षमा दिइसकेपछि पनि साथीले गरेको गल्तीबारे घरीघरी सम्झाइरहनु र हरेक पटक त्यो कुरा निस्कँदा उसलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु होइन। त्यसैले एक पटक क्षमा दिइसकेपछि त्यो कुरा मनबाट सधैँको लागि हटाइदिनुहोस्‌।”—माल्लोरी।
यसबारे सोच्नुहोस्‌: के त्यो कुरा त्यत्ति गम्भीर हो र? के तपाईँ साथीसित शान्तिमा रहन उसलाई क्षमा दिन सक्नुहुन्छ?—कलस्सी ३:१३.
तपाईँको साथीबारे पनि सोच्नुहोस्‌। बाइबल भन्छ: “तिमीहरू आफ्नै कुरामा मात्र होइन तर अरूको कुरामा पनि ध्यान देओ।”—फिलिप्पी २:४.
“यदि तपाईँहरूको मित्रतामा प्रेम र आदर छ भने तपाईँ समस्या उब्जिनेबित्तिकै त्यसलाई तुरुन्तै समाधान गर्नतर्फ लाग्नुहुन्छ। किनकि त्यो मित्रतालाई बलियो बनाउन तपाईँले निक्कै मेहनत गर्नुभएको छ। हो, तपाईँले त्यसमा आफ्नो समय र शक्‍ति खर्च गर्नुभएको छ; त्यसैले तपाईँ सजिलै त्यो मित्रता टुटेको चाहनुहुन्‍न।”—निकोल।
यसबारे सोच्नुहोस्‌: तपाईँको साथीको दृष्टिकोणमा केही न केही राम्रो पक्ष त अवश्‍य हुन्छ। त्यसैले त्यो बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्‌।—फिलिप्पी २:३.
निष्कर्ष: चित्त दुख्दा कसरी त्यसको सामना गर्ने भनेर थाह पाउनु एउटा कला हो र त्यस कलाले तपाईँलाई पछिसम्म फाइदा पुऱ्‍याउँछ। त्यसैले अहिल्यै त्यस्तो कला विकास गर्नुभए कसो होला?
“प्रत्येक चोटि समस्या उत्पन्‍न हुँदा त्यसबारे बसेरै कुरा गर्नुपर्छ भन्‍ने छैन। यदि म त्यो कुरा बिर्सन सक्छु भने म त्यसै गर्छु। त्यसो गर्दा शान्ति कायम गर्न सकिन्छ। तर स-सानो कुरामा पनि विवाद गरिहाल्ने बानी छ भने शान्ति कायम गर्न सकिँदैन।”—किआना।
“हरेक परिस्थितिमा म आफैलाई यस्तो प्रश्‍न सोध्ने गर्छु: ‘के यो समस्या मित्रता नै टुट्‌न सक्ने हदसम्मको गम्भीर हो र?’ प्रायजसो अवस्थामा यसको जवाफ ‘होइन’ नै हुन्छ।”—ट्रेग।
शेयर गर्ने शेयर गर्ने साथीले मेरो चित्त दुखायो भने के गर्ने?